yekutangaOS 0.4 Loki yave kuwanikwa | Linux Vakapindwa muropa
yekutangaOS 0.4 Loki yave kuwanikwa
chepakutangaOS Kugovera kweLinux kunonyepedzera kutevedzera kutaridzika kweMac OS X (kana Mac OS sezvavanoedza kuzvidaidza izvozvi kubva kuApple). Kune izvi ivo vakabatanidza nzvimbo yedesktop inozivikanwa sePantheon, ine madingindira uye dhoko rakafanana chaizvo neiro ratinowana paMac.Sezvaunoziva kuti zvakavakirwa paUbuntu, saka inowana nhaka mabhenefiti ese ekugovera uku uye hazvireve. shanduko hombe kana iwe ukauya nezvake kupfuura zvidiki zvidiki.
Kubva kuburitswa kwekupedzisira, vese vateveri vekugovera uku vanga vakamirira kuti vaone kusvika yekutangaOS 0.4 ine codename Loki, inova yazvino vhezheni yakatsiga yakaburitswa neboka rekuvandudza parizvino. Kana usati wambozviedza izvozvi, iwe unozoona kuti zvese dhizaini uye kutaridzika kwakafanana neiyo OS X, asi zvakare inoedza kutevedzera ino sisitimu mukuita, kuchengetedza kuve nyore uye kugadzikana kweUbuntu mune ayo musimboti.
Loki yakavakirwa paUbuntu 16.04 LTS, sekuziva kwako, Canonical's yakawedzerwa rutsigiro vhezheni. Ivo zvakare vakasanganisira Linux kernel 4.4, imwe yedzazvino vhezheni ine dzese dzazvino nhau uye madhiraivha, kunyangwe isiri yekupedzisira yezvose, hongu. Kune rimwe divi, kuti urambe wakatendeka kune ayo maratidziro uye kufanana zvakanyanya sezvinobvira neiyo Apple inoshanda sisitimu, vagadziri vacho vaisanganisira Epiphany web browser (yakajeka uye ine simba inoshandisa iyo Webkit2 injini), senge Safari.
Asi zvese izvi ndezvekushanduka kunonzwisisika kwekugoverwa kupi zvako, uko kunowanzouya neshanduro kune vhezheni dzemapakeji avo uye kernel, uye kunyange mamwe ma tweaks kana shanduko. Nekudaro, iyo huru nhau uye chinotarisirwa kwazvo chinhu pamusoro peshanduro nyowani ye elementaryOS ndeye iyo mireza nemaapplets izvo zvinobatsira mushandisi mune yavo ruzivo. Chinangwa cheichi ndechekuti isu tine zvese zvatinoda uye zvimwe zviripedyo pane yedu yePantheon tafura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » yekutangaOS 0.4 Loki yave kuwanikwa
Alonso Zamorano akadaro
yekutanga haiedze kutevedzera os x. Iyo yakagadzirirwa kubva pasi kumusoro nechinangwa chekupa yakanakisa mushandisi ruzivo. Ndiri os x mushandisi, uye ndinofunga chepuraimari inopa ari nani mushandisi ruzivo;)
Pear yakaedza kutevedzera iwe x, kunyangwe ini ndisingazive kuti chii chakaitika kwaari.
Pindura kuna Alonso Zamorano
Fernando Dorantes chinobata mufananidzo akadaro
Ini ndinofunga kuvandudzwa kwema mods ekutanga kufambira mberi zvishoma nezvishoma, semuenzaniso, paive neimwe ye luna inonzi super wingpanel, iyo yaiteedzera mac menyu, nekuti iyo menyu yekushandisa inoramba iri natively.
Asi iyi haiwirirane nefree, sevamwe.
Icho hachisi chinhu chaunoshandisa kuumbiridza mac, asi iri "smart" menyu inowanikwa zvisineyi saizi yehwindo. Mushandisi chiitiko chinhu.
Pindura kuna Fernando Dorantes
Guido Camargo akadaro
Mubvunzo haupo wekutanga os 32-bit Loki? Ndiri kuyedza kurodha pasi asi hazvindipe iyo sarudzo
Pindura Guido Camargo
Que !! akadaro
Iyo haishandisi yepasirese menyu asi hamburger mamenu, inosanganisa iyo windows muganho nebarbar uye kumashure kwemapurogiramu haina semi yakajeka, zvakakomba, ini handione zvakanyanya kufanana neOSX kunze kwekunge iwe uchinongedzera kudoko, asi izvo ndizvo yatove nezvakawanda.
Pindura kune Chii !!
Inowanikwa Linux Kubva Kukanda 7.10, yazvino vhezheni yakagadzika yeiyi yakasarudzika chirongwa
Tinogona ikozvino kunakidzwa neLinux Mint 18 KDE Edition